စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် subcortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏ macrostructural ပြောင်းလဲမှုများ (2012) - သင်၏ ဦး နှောက်အပေါ်
မှတ်ချက်များ - 'Psychogenic ED' သည် ဦး နှောက်မှထွက်သော ED ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာမကြာခဏအဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် '' စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED ။ ' ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် 'organic ED' သည်လိင်တံအဆင့်တွင် ED ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းမှာရိုးရိုးအိုမင်းခြင်း၊ အာရုံကြောနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်သည်။
ဒီလေ့လာမှုက psychogenic ED ပြင်းပြင်းထန်ထန် (အဆုလာဘ်စင်တာအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏ကျုံ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိနျူကလိယ accumbens) နှင့်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများ အဆိုပါ hypothalamus။ အာရုံကြောဆဲလ်များဆက်သွယ်ပြောဆိုရာမီးခိုးရောင်ကိစ္စဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက dopamine နှင့် dopamine receptors အကြောင်းပြောသောကျွန်ုပ်၏ဗီဒီယိုစီးရီး (ဘယ်ဘက်အနားသတ်) ကိုကြည့်ပါ။ ဒါကဒီလေ့လာမှုကိုလေ့လာသောအရာကိုပါပဲ။
သငျသညျအကြှနျုပျ၏စောင့်ကြည့်ပါလျှင် Porn & ED ဗီဒီယို ဦး နှောက်၏စိုက်ထူမှုစင်တာများတည်ရှိသည့် hypothalamus သို့နျူကလိယမှရွေ့လျားနေသောမြှားကိုသင်မြင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ hypothalamus နှင့်နျူကလိယ accumbens နှစ် ဦး စလုံးအတွက် dopamine libido နှင့်စိုက်ထူနောက်ကွယ်မှအဓိကအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စနည်းပါးလာ dopamine ထုတ်လုပ်အာရုံကြောဆဲလ်များနှင့်နည်းပါးလာ dopamine-လက်ခံရရှိအာရုံကြောဆဲလ်ဖော်ပြသည်။ အနိမ့် dopamine နဲ့ dopamine အချက်ပြ: တနည်းအားဖြင့်လေ့လာမှု psychogenic ED စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဟုဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် porn-သွေးဆောင် ED အပေါ်မှာငါ့အယူအဆနှင့်အတူဿုံ align ။
သူတို့ကအစမရှိ, ED နှင့်အတူယောက်ျားတွေမှ psychogenic ED နှင့်အတူယောက်ျားတွေနှိုင်းယှဉ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကတွေ့ရှိခဲ့:
"STAI မှတိုင်းတာသည့်အတိုင်းစိုးရိမ်စိတ်မရှိသလို BIS / BAS အတိုင်းအတာဖြင့်တိုင်းတာသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလည်းမတူကြပါ။ သိပ္ပံနည်းကျခြားနားချက်ကို BIS / BAS စကေး၏လက်အောက်ရှိ“ ပျော်ရွှင်စွာရှာဖွေခြင်း” သည်လူနာများထက်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်နှင့်တွေ့သည်။
ရလဒ်များ: psychogenic ED နှင့်အတူယောက်ျားတွေလျော့နည်းပျော်စရာ (အနိမ့် dopamine) ရှိခဲ့ကြောင်းခဲ့ကြသည်မှလွဲ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့မဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ ငါထင်တယ်လား မေးခွန်းမှာ“ ဘာဖြစ်လို့ဒီ ၁၇ မျိုးကိုစိတ်ရောဂါကုသမှုနည်းပါးတဲ့အမျိုးသားတွေကသူတို့ရဲ့ဆုလာဘ်စင်တာမှာမီးခိုးရောင်အမှုန်တွေနည်းနေတာလဲ၊ ငါမသိဘူး။ အသက် 17-19 ကနေအရွယ်ရှိ။ ပျမ်းမျှအသက် = ၃၂။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအသုံးပြုပါသလား။
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012;7(6): e39118 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0039118 ။ EPub 2012 ဇွန် 18 ။
Cera N ကို, Delli Pizzi S က, di Pierro ED, Gambi က F, Tartaro တစ်ဦးက, Vicentini ကို C, Paradiso Galatioto, G, Romani GL, Ferretti တစ်ဦးက.
အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပုံရိပ်ဌာန၊ အဆင့်မြင့်ဇီဝဆေးကုသမှုနည်းပညာအင်စတီကျု (ITAB)၊ ခီတီးမြို့တက္ကသိုလ်ဂျ။ အန်နန်ဇီယို၊ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခွင့်လုံလောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူမှီထိန်းသိမ်းနည်းဇွဲနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာအသက်တာ၏အရည်အသွေးအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုနှင့်အတူလူတို့တွင်အမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပျံ့နှံ့ပြသထားတယ်။ အနည်းငယ် neuroimaging လေ့လာမှုများခေါ်ဆောင်သွားဆွစဉ်အတွင်း prefrontal, cingulate နှင့် parietal cortical နေဖြင့်ကစားအခန်းကဏ္ဍကိုစောင့်ကြည့် erectile အလုပ်မဖြစ်၏နှောက်အခြေခံစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။
အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုထိုသို့သော hypothalamus နှင့် caudate နျူကလိယအဖြစ် subcortical ဒေသများ၏လူသိပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်အတွက်နျူကလိယ accumbens ၏သော့အခန်းကဏ္ဍကြားမှ, ဆင်းရဲသောအာရုံကိုအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍမှပေးဆောင်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော amygdala, hippocampus, နျူကလိယ accumbens, caudate နျူကလိယ, putamen, pallidum, thalamus, နှင့် psychogenic ED နှင့်ကျန်းမာယောက်ျားနှင့်အတူလူနာအတွက် hypothalamus အဖြစ် subcortical အဆောက်အဦများအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ (GM က) ကျုံ့ပုံစံများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီ။ Rigiscan အကဲဖြတ်, ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ, ယေဘုယျဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့်ဟော်မုန်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်ပြီးနောက် psychogenic ED နှင့် 17 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 25 ပြင်ပလူနာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI session များအတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
နျူကလိယ accumbens ၏သိသာထင်ရှားသော GM ကကျုံ့ထိန်းချုပ်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူလူနာနှစ်နိုင်ငံလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံဖော်ဒီကျုံ့ accumbens ၏လက်ဝဲ medial-anterior နှင့် posterior သောအဘို့ကိုတည်ရှိသောခဲ့ပြသခဲ့သည်။ Left နျူကလိယ IIEF-5 (Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း) ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် functioning အနိမ့် erectile ဆက်နွယ်နေကြောင်းလူနာ volumes ကို accumbens ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, left hypothalamus တစ် GM ကကျုံ့ကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုနျူကလိယ accumbens ၏ကျုံ့ psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကဒီအပြောင်းအလဲကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏လှုံ့ဆော်မှု-related အစိတ်အပိုင်းလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ဦးအာရုံကြောအခြေခံ elucidate ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
Psychogenic Erectile အလုပ်မဖြစ် (ED) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခွင့်လုံလောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူမှီထိန်းသိမ်းနည်းဇွဲနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး။ ထိုမှတပါး, psychogenic ED စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့်နေတဲ့ရောဂါကိုယ်စားပြုပြီးခံစားနေရသူနှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှစ်ဦးစလုံး၏အသက်တာ၏အရည်အသွေးအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ epidemiological လေ့လာမှုများလူတို့တွင် psychogenic ED ၏မြင့်မားသောပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပွားမှုပြသခဲ့ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များတွင်မြောက်မြားစွာအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သော cingulate cortex, insula caudate နျူကလိယ, putamen, thalamus, amygdala နှင့် hypothalamus အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော cortical နှင့် subcortical အဆောက်အဦများ, တစ်ဦးပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြင့်လိင်သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked ဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်ဒေသများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ -။ ဒီလေ့လာမှုတွေကအမြင်အာရုံမောင်းနှင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများအားဖြင့်ကစားအခန်းကဏ္ဍကို disentangle ခွင့်ရှိသည်။ အမှန်စင်စစ်အထီးလိင်စိတ်နိုးထဦးနှောက်ဒေသများတစ်ကျယ်ပြန့်အစုံအပေါ်ထပ်ဆင့်လွှင်ကြောင်း, သိမြင်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သောတစ် multidimensional အတှေ့အကွုံအဖြစ်ပဋိသန္ဓေယူပြီ။ ပြောင်းပြန်အနည်းငယ် neuroimaging လေ့လာမှုများအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ဦးနှောက်ဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကဥပမာအားဖြင့် cingulate နှင့်တိုကျရိုကျ cortex, ယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ, အခြို့သောဦးနှောက်ဒေသများကွောငျးတငျပွ -။ သို့သော်မြောက်မြားစွာအထောက်အထားများ - သုတ်ရည်ထိအပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့် subcortical အဆောက်အဦများ၏အရေးပါမှုကိုညွှန်ပြ။ အမှန်မှာထို hypothalamus အဓိကအခန်းကဏ္ဍ ,  penile စိုက်ထူ၏ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုပါ။ Ferretti နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအဆိုအရ  အဆိုပါ hypothalamus ခေါ်ဆောင်သွားကလစ်ပ်အားဖြင့် evoked အဆိုပါ erectile တုံ့ပြန်မှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဦးနှောက်ဧရိယာရှိနိုင်ပါသည်။
Little ကအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ကျန်ရှိနေသော subcortical အဆောက်အဦများအားဖြင့်ကစားအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်ကိစ္စ (GM က) ဒေသများအနက်, အနျူကလိယ accumbens ဆုလာဘ်များနှင့်ပျော်မွေ့ဆားကစ်တစ်ခုကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုအခန်းကဏ္ဍ - နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏ပေးခြင်းအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် caudate နျူကလိယ .
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ psychogenic ED လူနာအပျော်အပါးနှင့်ဆုလာဘ်အတွက်, ယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုနက်ရှိုင်း GM ကအဆောက်အဦများ၏နိုင်တဲ့ macro-ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲပြသလျှင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီအယူအဆ, amygdala, caudate, hippocampus, pallidum, putamen, thalamus နှင့် hypothalamus psychogenic ED လူနာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ၏လေ့လာမှုတစ်ခုလူဦးရေအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယ accumbens အဖြစ်ဦးနှောက်ရဲ့ရှစ် subcortical GM ကအဆောက်အဦများ, ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI အကဲဖြတ်စမ်းသပ်ဖို့။ ယင်းအုပ်စုနှစ်စုအကြားမည်သည့်ကွဲပြားမှုကဤဒေသအချို့ရှိရှိလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဧရိယာ volumes ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့်အမူအကျင့်အစီအမံများအကြားဆက်ဆံရေးများရှိနေခြင်းကိုတွေ့မြင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှု Chieti တက္ကသိုလ် (PROT 1806 / 09 COET) ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခြင်းနှင့်ဟယ်လ်စင်ကီကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်၎င်းတို့၏နွေးထွေးမှု၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဒီရိုများနှင့် Beck နေဖြင့်အကြံပြုလမ်းညွှန်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်လုံလောက်ခဲ့သည် ။ အဆိုပါလေ့လာမှုဒီဇိုင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးသဘောတူညီခကျြကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးပါဝင်သူများအနေဖြင့်ရရှိသောခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 97 နှင့်မေလတွင် 2009 အကြားတက္ကသိုလ်သည် L'၏အာကုလကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသိပ္ပံဌာန၏ Urology ၏ဌာနခွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်များအတွက်ပြင်ပလူနာရဲ့ဆေးခန်းသွားရောက်ကြည့်ရှုသောသူသည် 2010 လူနာကဒီလေ့လာမှုအဘို့စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာဘာသာရပ်များ Chieti နှင့် Teramo ၏ဆေးရုံ၏တက္ကသိုလ်မှစာစောင်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တစ်ဦးအသိပေးစာအားဖွငျ့စုဆောင်းခဲ့ကြသော်လည်းဆေးခန်းသွားရောက်ကြည့်ရှုသောသူသည်လူနာများ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ညည်းညူ။
အားလုံးသင်တန်းသားများကိုအထွေထွေဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ, ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့် andrologic စာမေးပွဲ, စိတ်ရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိစစ်ခြင်းနှင့်မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက် MRI အပါအဝင်တစ်ဦးစံ protocol ကိုအညီဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
လူနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အခက်အခဲများလူနာအားဖြင့်ကြုံတွေ့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားဖြင့်အကြောင်းကြားများအတွက်ပြင်ပလူနာရဲ့ဆေးခန်းကိုရောက်လာတယ်။ အဆိုပါလူနာရှိခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည် psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (generalized သို့မဟုတ်အခြေအနေအမျိုးအစားများ) သို့မဟုတ် အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (vasculogenic, • Neurogenic disease အာရုံကြော, ဟော်မုန်း, ဇီဝဖြစ်စဉ်, မူးယစ်ဆေးသွေးဆောင်) ။ အဆိုပါဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါများအတွက်လက်ရှိလမ်းညွှန်ချက်များသည်အောက်ပါဖျော်ဖြေခဲ့သည် .
psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ယေဘူယျအမျိုးအစား) ၏အဖြေရှာတဲ့အကဲဖြတ် genitourinary, endocrine, သွေးကြောများနှင့်အာရုံကြောစနစ်များအပေါ်အထူးအလေးပေးအတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲအားဖွငျ့ဖျြောခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သာမန် nocturnal နှငျ့နံနကျစိုက်ထူအကဲဖြတ်ခဲ့သည် သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ညစဉ်အတွင်း Rigiscan device ကိုအသုံးပြုပုံပုံမှန် penile hemodynamics အရောင် Doppler Sonography သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်နေစဉ်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာစမ်းသပ်မှုများတွင်ကျောင်းအပ်များအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်မပြုခဲ့သောကြောင့်, စုစုပေါင်း 80 လူနာဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကစိတ်မကျဆေး Antidepressants အပေါ်ခဲ့ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်ဟော်မုန်းလိုငွေပြမှုရှိခဲ့သညျ။ သို့သော် psychogenic erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူအားလုံးလူနာစာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ အလားတူလက်တွေ့စာမေးပွဲထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန် nocturnal စိုက်ထူကိုလည်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်အတူတဆယ်ခုနစ်လက်ျာဘက်လက်သို့အပ်လိင်ကွဲပြင်ပလူနာ (အသက်±ဆိုလို SD က = 34.3 ± 11; အကွာအဝေး 19-63) နှင့်နှစ်ဆယ်ငါးကျန်းမာညာဘက်လက်သို့အပ်လိင်ကွဲယောက်ျား (SD က±အသက်အရွယ်ဆိုလို =33.4 ± 10; အကွာအဝေး 21-67) ဒီလေ့လာမှုအဘို့စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ လူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုလူမျိုးရေး, အသက်, ပညာရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒါပေမယ့်လည်းနီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌သာကိုက်ညီခဲ့သည် .
အားလုံးဘာသာရပ်များတစ်စိတ်ရောဂါနဲ့ 1-ဇဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းအင်တာဗျူးခံယူခြင်းနှင့် Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI) ယူ .
Erectile function ကို, လိင်စိတ်နိုးထ, psychophysical အခြေအနေ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအောက်ပါမေးခွန်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်: Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း (IIEF) , လိင်စိတ်နိုးထ Inventory (SAI) , SCL-90-R ကို , ပြည်နယ်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory (Stay) နှင့်အပြုအမူတားစီး / အပြုအမူ Activation စကေး (bis / BAS စကေး) အသီးသီး။
မြေတပြင်လုံးဦးနှောက် MRI signal ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့် signal ကိုဧည့်ခံဘို့အကာရှစ်ရုပ်သံလိုင်းခေါင်းကိုကွိုင်တစ်ခုလုံးကိုယျခန်ဓာ radiofrequency ကွိုင်သုံးပြီး, (အကောင်းဆုံး Philips ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်, နယ်သာလန်) တစ်ဦး 3.0 T က "Achieva" Philips ကတကိုယ်လုံးစကင်နာကိုဆိုလိုသည်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံး resolution ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသံအတိုးအကျယ်တစ် 3D အစာရှောင်ခြင်းအကွက်တွင်ပဲ့တင်သံ T ကနေတဆင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်1-weighted sequence ကို။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသိမ်းယူမှု parameters တွေကိုခဲ့ကြသည်: voxel အရွယ်အစား 1 မီလီမီတာ isotropic, TR / TE = 8.1 / 3.7 ms; အပိုင်း = 160 အရေအတွက်; ကဏ္ဍများအကြားမျှကွာဟမှု; မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက်လွှမ်းခြုံ; လှန်ထောင့် = 8 °နှင့်သဘောဖွငျ့အချက် =2။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI အချက်အလက်များကိုဦးနှောက်၏ Functional MRI (FMRIB) Software များစာကြည့်တိုက် [FLS မှ tool ကိုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/index.html] ,  ဗားရှင်း 4.1 ။ ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့မီ, အခြေခံအဆောက်အဦးပုံရိပ်များ၏ဆူညံသံလျှော့ချရေး Susan algorithm ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် [http://www.fmrib.ox.ac.uk/analysis/research/susan/].
Volumes ကိုတိုင်းတာခြင်းနှင့် Subcortical structures များလေ့လာခြင်းပုံဖော်
အဆိုပါပရောပ tool က 3D T ရဲ့ဆှဖှေဲ့ alignment ကိုဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်1 လွတ်လပ်မှု 152 ဒီဂရီ (ဆိုလိုသည်မှာသုံးဘာသာ, သုံးလည့်သုံးအရွယ်အစားနှင့်သုံး skews) အပေါ်အခြေခံပြီးဆှဖှေဲ့အသွင်ပြောင်းအားဖွငျ့ MNI12 template ကို (Montreal အာရုံကြောဌာန Institute) မှာပုံရိပ်တွေကို , ။ Subcortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စ amygdala, hippocampus, နျူကလိယ accumbens, caudate နျူကလိယ, putamen, pallidum နှင့် thalamus ၏ (GM က) ဖွဲ့စည်းပုံ segment နှင့်လုံးဝအသံအတိုးအကျယ်ခန့်မှန်းချက်မှာ FIRST သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြ ။ အောင်မြင်သော, subcortical ဒေသများအမြင်အာရုံအမှားအယွင်းများများအတွက် check လုပ်ထားခဲ့ကြသည်။
တစ်ခုချင်းစီကို GM က subcortical ဖွဲ့စည်းပုံမှာများအတွက် FIRST, ရလဒ်များတြိဂံအစုတခု၏ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း (MNI152 အာကာသအတွက်) တစ်ဦးမျက်နှာပြင်ကွက်ပေးပါသည်။ ယျြတြိဂံ၏ apices vertices ဟုခေါ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို GM ကဖွဲ့စည်းပုံတွင်ဤ vertices ၏နံပါတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့သောကွောငျ့, သက်ဆိုင်ရာ vertices တစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးနှင့်အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဗေဒကိုပြောင်းလဲအဆိုပါ vertex မတရားတိမ်းညွတ် / အနေအထားကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဤနည်းအားဖြင့်ဒေသခံပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုများကိုတိုက်ရိုက် vertex တည်နေရာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လူနာအုပ်စုများအကြားယုတ် vertex အနေအထားတွင်ခြားနားချက်များမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ vertices ၏ Group မှနှိုင်းယှဉ်သည့် F-စာရင်းဇယားသုံးပြီးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် , ။ ဒီဇိုင်း matrix ကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် (ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်သုည, ထိုလူနာတွေအတွက်သူမြား) သတ်မှတ်ခြင်းတစ်ခုတည်း regressor ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်တစ်ရှူး Volume ကို၏ခန့်မှန်းချက်
SIENAX [http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fast4/index.html#FastGui] ဦးနှောက်တစ်သျှူးအသံအတိုးအကျယ်ကိုခန့်မှန်းရန်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ယခင်အပိုင်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဦးနှောက်နှင့်ဦးခေါင်းခွံထုတ်ယူပြီးနောက်, တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်၏မူလဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုဆှဖှေဲ့-မှတ်ပုံတင် MNI 152 အာကာသဖို့ဖြစ်တယ်။ တစ်ရှူး-type အမျိုးအစား segment  GM က၏ volumes ကိုခန့်မှန်းရန်ဖျော်ဖြေဖြူကိစ္စ (WM), အရံ GM က, CSF နှင့်စုစုပေါင်းဦးနှောက်အသံအတိုးအကျယ် ventricular ခဲ့သည်။ Intracranial အသံအတိုးအကျယ် (ICV) အတူတကွနှောက်ကျောရိုးအရည်, စုစုပေါင်း GM ကများနှင့်စုစုပေါင်း WM ၏ volumes ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။
ရွယ် Voxel-based Morphometry (VBM) အားသုံးသပ်ခြင်း
စာပေအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်နည်းလမ်းများနှင့်အတူအရ , hypothalamus ၏ရွယ်-VBM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များထက် ED လူနာဖြစ်ပေါ်သည့် morphological အပြောင်းအလဲများကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်ကို hypothalamus ၏ရွယ်ကိုယ်တိုင် MRI Atlas ၏အခြေခံပေါ်မှာရေးဆွဲခဲ့သည် .
ဒေတာကိုတစ်ဦး VBM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် , ။ ဦးနှောက်-ထုတ်ယူခြင်းသုံးပြီး BET ပြီးနောက် , တစ်ရှူး-type အမျိုးအစား segment FAST4 သုံးပြီးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် ။ ရရှိလာတဲ့ GM ကတစိတ်တပိုင်းအသံအတိုးအကျယ်ပုံတွေကိုဆှဖှေဲ့မှတ်ပုံတင်ရေး tool ကိုပရောပသုံးပြီးစံအာကာသ MNI152 ဖို့ aligned ခဲ့ကြသည် , , FNIRT သုံးပြီး nonlinear မှတ်ပုံတင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် , ။ ရရှိလာတဲ့ပုံရိပ်တွေသောဇာတိ GM ကပုံရိပ်တွေထို့နောက် Non-linearly re-မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြရန်, တစ်ဦး template ကိုဖန်တီးရန်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ ဒေသခံတိုးချဲ့သို့မဟုတ်ကျုံ့ဆုံးအဘို့, မှတ်ပုံတင်တစိတ်တပိုင်းအသံအတိုးအကျယ်ပုံရိပ်တွေထို့နောက်အတိုင် field ရဲ့ Jacobian နေဖြင့်ခွဲဝေခြင်းဖြင့် modulated ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူနာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများ FSL ရှိ "ကို randomize" permutation-စမ်းသပ် tool ကိုအတွက် voxel ပညာရှိစာရင်းဇယား (5000 permutation) နှင့်တံခါးခုံလွတ်ပြွတ်-တိုးမြှင့် option ကိုအသုံးပြုပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် [http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/randomise/index.html] ။ မှားယွင်းသောလက္ခဏာများအတွက်စွန့်စားရမှုအန္တရာယ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အုပ်စုအကြားခြားနားချက်များအတွက်အရေးပါမှုကို p <0.05 ဟုသတ်မှတ်ပြီးမိသားစုပညာရှိအမှား (FWE) အတွက်ပြင်ဆင်သည်။ IIEF-5 နှင့် SAI နှင့်ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်မှုကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Statisticsa® 6.0 ကိုဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ED လူနာများနှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများကိုအသက်၊ ပညာရေးအဆင့်၊ နီကိုတင်း၊ ICV နှင့်နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်ဖွဲ့စည်းပုံများ၏ပမာဏအတွက်ကွဲပြားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (1-way ANOVA) အားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ အမျိုးအစားငါအမှားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို minimize နိုင်ရန်အတွက်ခွဲခြား subcortical ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုတည်း volumes ကိုသုံးပြီးကှဲလှဲတစ်ခုခြုံငုံ multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (မှီခို variable တွေကိုအဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ICVs များအတွက်တညျ့။ ထို့နောက် Volume တန်ဖိုးတစ်ခုစီအတွက် (အုပ်စုများအကြား) တစ်လမ်းသွား ANOVAs ကိုသုံးသည်။ p <1 ၏အရေးပါမှုကိုတစ် ဦး အဆင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအစီအမံများနှင့်အသံအတိုးအကျယ်တန်ဖိုးများအကြားဖြစ်နိုင်ခြေဆက်နွယ်မှုကိုစစ်ဆေးသည်။ ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ပါဝင်သည်ယုတ် volumes များတန်ဖိုးများနှင့်အမူအကျင့်အစီအမံများ, အုပ်စုကွဲပြားမှုအကြားသိသိသာသာပြသသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုအုပ်စုနှစ်စုအတွက် Spearman ၏ rho မြှောက်ဖော်ကိန်းဖြင့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် (p <0.05) ။
ယင်းအုပ်စုနှစ်စုအဘို့လူဦးရေဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များအတွက်ပြသထားပါသည် စားပွဲတင် 1.
ED လူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနီကိုတင်း၏အသက်အရွယ်, ပညာရေးအဆင့်ကိုစားသုံးမှုနှင့်မီလီမီတာအတွက် ICV (အချင်းချင်းအပြန်အလှန် Cranial Volume အတွက်သိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူး3), မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူကိစ္စ volumes ကိုများနှင့်စုစုပေါင်းဦးနှောက်ထဲမှာ volume ။
အုပ်စုတစ်စုကွာခြားချက်အကြားသိသာထင်ရှားသောလူနာအုပ်စုတစ်စုထက်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုအဆင့်မြင့်တန်ဖိုးများနှင့်အတူ IIEF-5 စုစုပေါင်းရမှတ်အဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် (F(1,40)= 79; p <0.001) နှင့် SAI ၏စုစုပေါင်းရမှတ်များအတွက် F နှင့်အတူ(1,40)= 13 နှင့် p <0.001) ။ အထူးသဖြင့်, ထို SAI ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများ subscale "စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့" အတွက်တစ်ဦးကိုသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ပညာရေးလူနာထက်ရမှတ်ဆိုလိုပြသ (F(1,40)= ၂၂.၃; p <22.3) ။ ကိုမ Stay ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်, မဟုတ်သလိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, bis / BAS စကေးဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, အုပ်စုတစုကွဲပြားမှုများအကြားသိသာထင်ရှားသောပြသခဲ့သည်။ တစ်ဦးကသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်လူနာထက်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားယုတ်ရမှတ်အတူ bis / BAS စကေး၏ subscale "ရှာပျော်စရာ" ကိုထင်ရှားပြ (F(1,40)= ၂၂.၃; p <5.2) ။
(တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်အတွက်7subcortical အဆောက်အဦများ (thalamus, hippocampus, caudate, putamen, pallidum, amygdala နှင့် accumbens) segmented ခဲ့ကြသည်နှင့်၎င်းတို့၏ volumes ကိုပါ FIRST tool ကိုနှင့်အတူတိုင်းတာFig.1). စားပွဲတင်2ED လူနာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက်ကုဗမီလီမီတာအတွက်အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒေသယုတ် volumes ကို (M) နှင့်စံသွေဖည်မှု (SD) ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ စားပွဲတင်3သီးခြားစီနှစ်ခုဦးနှောက်ခြမ်းဘို့စိတ်ရှည်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက် subcortical အဆောက်အဦများ၏ယုတ် volumes ကိုပြသသည်။ တစ်ဦးက MANOVA အဆိုပါ subcortical ဒေသများရှိအုပ်စုတစ်စုကွဲပြားမှုများအကြား၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြ (Wilkes λ = 0.58; က F = 3,45; p = 0.006) ။ ထို့နောက်ဖွင့်နောက်ကိုလိုက်တလမ်း ANOVAs တစ်စီးရီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ED လူနာအတွက်နျူကလိယ accumbens ၏ volume ထဲမှာသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းထင်ရှား (F(1,40)= 11,5; p = 0.001) ။
နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်ကိစ္စအဆောက်အဦများ၏ segment ။
Psychogenic ED စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက်ကုဗမီလီမီတာအတွက် subcortical အဆောက်အဦများ၏ volumes ကိုဆိုလို။
Psychogenic ED စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများနှင့်သီးခြားစီနှစ်ခုဦးနှောက် hemisphere များအတွက်ကုဗမီလီမီတာအတွက် subcortical အဆောက်အဦများ၏ mean volumes ကို။
လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ subcortical ဒေသ volumes ကို၏တန်ဖိုးများအပေါ်ဖျော်ဖြေတစ်ဦးအပိုဆောင်း MANOVA, (Wilkes λ = 0.48; က F = 2,09; p = 0.04) ED လူနာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ အကျိုးဆက်အတိုင်းလိုက်နာ-up, တဦးတည်း -way ANOVAs သိသာထင်ရှားသောကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူ ED လူနာအတွက်လက်ဝဲနှင့်လက်ယာနျူကလိယ accumbens ၏ volumes ကိုလျော့နည်းသွားပြသ (F(1,40)= 9.76; p = 0.003; F ကို(1,40)= 9.19; p အသီးသီး = 0.004) ။
နျူကလီးယပ် accumbens အပေါ်ဖျော်ဖြေပုံသဏ္ဍာန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုမှာပြနေကြသည် ပုံ 2.
ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့် Psychogenic ED လူနာအကြားနျူကလိယ accumbens ၏ vertex ပညာရှိနှိုင်းယှဉ်။
ယင်းအုပ်စုနှစ်စုအကြား vertex တည်နေရာများ၏နှိုင်းယှဉ်နျူကလီးယပ် accumbens ၏ posterior သောအဘို့ကိုမှနှစ်နိုင်ငံ, လက်ဝဲ medial-anterior မှစာပေးစာယူအတွက် ED လူနာအတွက်သိသာထင်ရှားသောဒေသဆိုင်ရာကျုံ့ပြ။
အစီရင်ခံအဖြစ် ပုံ 3, R ကိုOI-VBM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဘယ်ဘက် hypothalamus တွင် GM ကျုံ့ခြင်း (p <0.05, FWE နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားသည်) ကိုပြသည်။ အထူးသ, GM ဆုံးရှုံးမှုဟာ anterior hypothalamic areaရိယာ၏ supraoptic နျူကလိယ၌တွေ့ခဲ့သည် (x, y, z ကိုသြဒိနိတ်: -6, -2, -16, p = 0.01corrected), အ hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယ (x, y, z ကိုသြဒီနိတ်: -4, -4, -16, p = 0.02) တညျ့, နှင့် medial preoptic နျူကလိယ (x, y, z ကိုသြဒိနိတ်: -4, 0, -16, p = 0.03) တညျ့။
ကျန်းမာဘာသာရပ်များထက် ED လူနာ၌ကျန်ကြွင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ၏မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အရှုံးပေါ်။
အဆိုပါဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာအစီအမံများ (IIEF နှင့် SAI) နှင့် FIRST နှင့်ရွယ်-VBM ရလဒ်များအကြားဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ လူနာအုပ်စုအတွင်းရှိ IIEF ၏ပျမ်းမျှရမှတ်များနှင့်ဘယ်ဖက်နျူကလိယ accumbens အကြားနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုများ (rho = 0,6; p <0.05, မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်တည့်မတ်ခဲ့သည်) နှင့် SAI ၏စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့်ဘယ်ဘက် hypothalamus တို့အကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ (p = 0.01, အ FWE မှုနှုန်းထိန်းအကွပ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအထီး psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် subcortical ဒေသကျုံ့များ၏ပုံစံများစူးစမ်း။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူအထွေထွေအမျိုးအစား psychogenic ED ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူရောဂါလူနာနှစ်ဦးစလုံးလက်ဝဲနှင့်လက်ယာနျူကလိယ accumbens နှင့်လက်ဝဲ hypothalamus တစ်သိသိသာသာ GM ကကျုံ့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဤရွေ့ကားနိုင်တဲ့ macro-ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲပညာရေးအဆင့်အတန်းများနှင့် intracranial အသံအတိုးအကျယ်, နီကိုတင်းသုံးစွဲမှုအသက်လွတ်လပ်သောခဲ့ကြသည်။ FErectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း (IIEF) ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် urther, ဘယ်ဘက်နျူကလိယ accumbens ၏ GM ကကျုံ့လူနာအတွက် functioning ဆင်းရဲသားကို erectile နှင့်အတူတစ်ဦးအပြုသဘောဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ Moreover, လက်ဝဲ hypothalamic ဒေသများအတွက် GM ကအသံအတိုးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနောက်ထပ်အတိုင်းအတာကိုကိုယ်စားပြုသောလိင်စိတ်နိုးထ Inventory (SAI) ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤ subcortical ဒေသများတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့အများကြီးအာရုံကြောလမ်းကြောင်းများတွင်ပါဝင်ရန်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအခြေခံပြီးပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏အဓိကတွေ့ရှိချက်လူနာအုပ်စုတစ်စု၏နျူကလိယ accumbens အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ GM ကကျုံ့ခြင်းဖြင့်ကိုယ်စားပြုထားသည်။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်နျူကလိယ accumbens နေဖြင့်ကစားအခန်းကဏ္ဍကိုယောက်ျားကြွက်များတွင်ဇီဝကမ္မသက်သေအထောက်အထားများကထောက်ခံခဲ့သည်  ကျန်းမာယောက်ျားအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများအားဖြင့်အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွနေစဉ်အတွင်း . Tသူသည်နျူကလိယအတွက် dopamine ၏လွှတ်ပေးရန်အာရုံခံတွေကိုတုန့်ပြန်မူအကျင့်ကို Activation တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း mesolimbic system ကိုမက်လုံးပေးသို့မဟုတ်စစ်ကူ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပြ drives တွေကို accumbens ။ ဤသည်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူဖို့ NACC အတွက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုချိတ်ဆက်ဇီဝကမ္မသက်သေအထောက်အထားများကထောက်ခံနေသည် , ။ အမျိုးသမီးကြွက်သူ့ကိုမိတ်ဆက်သောအခါအမှန်စင်စစ်ယောက်ျားကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine တစ်ခုတိုးလာအဆင့်ကိုကြည့်ရှုလေ့လာသည်။ ဒီအတိုးပို့စ် copulatory ဆန့်ကျင်ဘက်ကာလအတွင်းလျော့ချခဲ့သည်။
ဒီအလင်းမှာနျူကလိယ accumbens အတွက်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ လူ့နျူကလိယ accumbens မဟုတ်ဘဲ salience ထက်သာယာသောဓာတ်ပုံများကိုလှုံ့ဆော်မှုမှရွေးချယ်တုံ့ပြန်ဖြစ်ဟန် ။ Redoutèနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအဆိုအရ  နျူကလီးယပ် accumbens အထီးလိင်စိတ်နိုးထများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်းတွင်ပါဝင်ရန်ဖွယ်ရှိသည်။ လူ့နျူကလိယ accumbens အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွခြင်းဖြင့် evoked စိုက်ထူစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ပါတယ် , .
ထို့အပြင်အသွင်သဏ္ဌာန်ကွဲပြားမှုပေါ်မှာငါတို့ရလဒ်များလေ့လာကျုံ့အဓိကအားနျူကလီးယပ် accumbens ၏ shell ကိုပါဝငျကွောငျးပေးထားသည်စိတ်ခွန်အားနိုးယူဆချက်နှင့်အညီဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ Shell ကလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့အထူးသဖြင့်ဆက်စပ်သည်ထင်ရှားတဲ့ဒေသကိုယ်စားပြု , ။ အထီးကြွက်အဆိုပါရွေးချယ် electrophysiological shell ကို၏ inactivation, ဒါပေမယ့်မနျူကလိယ accumbens ၏အဓိကများတွင် non-ဆုလာဘ် cue တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ဟန် .
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်နျူကလိယ accumbens နှင့် hypothalamus ၏ medial preoptic ဧရိယာကနေ dopamine များလွှတ်ပေးရန်အပြုသဘော copulatory behavio များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအဆင့်ထိန်းညှိဟန်ဘယ်လောက်လေ့လာတွေ့ရှိပြီဟုယခင်တိရိစ္ဆာန်အထောက်အထားများနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏r.
ဤနည်းသည် hypothalamus erectile function ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အတှကျမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒေသကိုယ်စားပြု , ။ ကျနော်တို့ psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ၏မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာဤပြောင်းလဲမှုများထို anterior hypothalamic ဧရိယာ၏ supraoptic နျူကလိယ, medial preoptic နှင့် ventromedial နျူကလိယ၏ဧရိယာ၌လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်.
စမ်းသပ်ဆဲအထောက်အထားများတစ်စီးရီးအဆိုအရ medial preoptic ဧရိယာနှင့် hypothalamus ၏ anterior သောအဘို့ကိုတိုင်းနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အတွက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အရေးပါလှတဲ့s ။ အထူးသညျဤ hypothalamic ဒေသနှစ်နိုင်ငံကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပှေါကြွက်များတွင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုဖျက်သိမ်း , ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများ medial preoptic နျူကလိယ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တွေ့ရှိရပါသည်နှင့် anterior hypothalamus ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအယှက်ကြောင်းပြသ , , . ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများနှင့်ကျူးကျော်နေစဉ်အတွင်းတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုတှေ့မွငျခဲ့သ ။ Georgiadis နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ  ပြသ ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောပုဒ်မခွဲအဆိုပါ hypothalamus ၏ကျန်းမာယောက်ျားအတွက်ရွေးချယ်စိုက်ထူ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှဆက်စပ်နေပါတယ်။ အမှန်မှာထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus penile လုံးပတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်နှိုးဆော်ခြင်းပြည်နယ်များနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်.
functional neuroimaging လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သော hippocampus ကဲ့သို့သောအခြား subcortical အဆောက်အဦသည်, amygdale နှင့် thalamus အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွဖို့နဲ့ penile စိုက်ထူ၏တိကျသောအဆင့်မှစပ်လျဉ်းမြင့်မားတဲ့လှုပ်ရှားမှုပေးအပ်ကြောင်းပြသကြ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအဆိုအရလူနာအုပ်စုတစ်စုတွင်ဤနက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်အဆောက်အဦများ၏အသံအတိုးအကျယ်မအပြောင်းအလဲများရှိခဲ့သည်.
ဒီလေ့လာမှုအချို့န့်အသတ်ရှိကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပါ FIRST tool ကို hypothalamus segment မပါဝင်ပါဘူးကတည်းကရွယ်-VMB ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလိုအလျောက် hypothalamus အတွက်မက္ကရိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုအကဲဖြတ်များအတွက်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ သို့သော်ဤချဉ်းကပ်မှုပုံစံသည်မူလကအဆိုပါ subcortical GM ကအတွက်မျိုးဆက် artefact မှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်း, subcortical အဆောက်အဦများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမခံခဲ့ရပါဘူး။ VMB ပြည်တွင်းဖြစ်ပျမ်းမျှ GM က segment အပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်တစ်ရှူး-type အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်မတရားတင်ပါသည်အတိုင်းအတာ၏တိ သို့ဖြစ်. အထိခိုက်မခံဖြစ်ပါသည် , -။ ဤအကြောင်းကြောင့်ရွယ်-VBM တွေ့ရှိချက်များ၏အနက်အချို့သတိထားလိုအပ်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ဦးနှောက်ဆက်စပ်မှုများကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားကြားမှ, အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဆင်းရဲသားကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်များတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဟန်နှစ်ခု subcortical ဒေသများသည်နျူကလိယ accumbens နှင့် hypothalamus ၏ GM ကအတွက်မက္ကရိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်အလေးပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကျန်းမာယောက်ျားအတွက်ကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခွင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်း၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ထို့အပွငျက psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူထိခိုက်လူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏တားစီးကဒီအစိတ်အပိုင်းအပေါ်ပြုမူစေခြင်းငှါယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ယခင်အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging အထောက်အထားများနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွား subcortical အဆောက်အဦများ၏ပြောင်းလဲအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်အပေါ်သစ်ကိုအလင်းကိုသွန်း။
1. Stoléru S က, et al Grégoire MC, Gerard: D, Decety J ကို, Lafarge အီး။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထ၏ Neuroanatomical Correlate ။ arc လိင်ပြုမူနေ။ 1999;28: 1-21 ။ [PubMed]
2. Redouté J ကို, Stoléru S က, Grégoire MC, ကုန်ကျစရိတ် N ကို, Cinotti L ကို, et al ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Hum ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း။ 2000;11: 162-177 ။ [PubMed]
3. Arnow BA, Desmond je, Banner ll, ဂလိုဗာ GH, ရှောလမုန်တစ်ဦးက, et al ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲအထီးအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ။ ဦးနှောက်။ 2002;125: 1014-1023 ။ [PubMed]
4. Ferretti တစ်ဦးက, Caulo M က, et al Del Gratta ကို C, Di Matteo R ကို, Merla တစ်ဦး။ အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ Dynamics ကို: fMRI အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသဦးနှောက်ကို Activation ၏ကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများကို။ Neuroimage ။ 2005;26: 1086-1096 ။ [PubMed]
5. Georgiadis JR, Farrell MJ, Boessen R ကို, ဒဲ DA, Gavrilescu M က, et al ။ ဂေဟစနစ်တရားဝင်မှုနှင့်အတူအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း dynamic subcortical သွေးစီးဆင်းမှု: တစ် perfusion fMRI လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2010;50: 208-216 ။ [PubMed]
6. et al Montorsi က F, Perani: D, Anchisi: D, Salonia တစ်ဦးက, Scifo P ကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်း Apomorphine-သွေးဆောင်ဦးနှောက်မော်ဂျူ: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု Int J ကိုသင်ျခြို Res နှင့်ဆက်စပ်သောအလယ်ပိုင်းဖြစ်ရပ်မှာအသစ်တခုကိုကြည့်။ 2003;15 (3): 203-9 ။ [PubMed]
7. et al Montorsi က F, Perani: D, Anchisi: D, Salonia တစ်ဦးက, Scifo P ကို။ apomorphine များ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုအောက်ပါဗီဒီယိုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများ: ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ EUR Urol ။ 2003;43: 405-411 ။ [PubMed]
8. Redouté J ကို, Stoléru S က, Pugeat M က, ကုန်ကျစရိတ် N ကို, Lavenne က F, et al ။ ကုသတည်းကကုသမှုမရှိဘူး hypogonadal လူနာအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Psychoneuroend ။ 2005;30: 461-482 ။ [PubMed]
9. Giuliano က F, စိုက်ထူ၏ Rampin O. ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောထိန်းချုပ်မှု။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2004;83: 189-201 ။ [PubMed]
10 ။ Kondo Y ကို, Sachs bd, estrous အမျိုးသမီးထံမှဝေးလံခေါင်သီလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked ကြွက် penile စိုက်ထူအတွက် medial amygdala ၏ Sakuma Y. အရေးပါမှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1998;91: 215-222 ။ [PubMed]
11 ။ Dominiguez JM, Hull က EM ။ Dopamine က, medial preoptic ဧရိယာနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2005;86: 356-368 ။ [PubMed]
12 ။ Argiolas တစ်ဦးက, Melis MR ။ oxytocin နှင့်အထီးနို့တိုက်သတ္တဝါများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် paraventricular နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2004;83: 309-317 ။ [PubMed]
13 ။ အနောက် CHK, Clancy AN မိုက်ကယ် RP ။ နျူကလိယ၏ Enhanced တုံ့ပြန်မှုလိင်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်ဆက်စပ်ဝတ္ထုအနံ့မှအထီးကြွက်များတွင်အာရုံခံ accumbens ။ ဦးနှောက် Res ။ 1992;585: 49-55 ။ [PubMed]
14 ။ Becker က JB, Rudick CN, Jenkins WJ ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience ။ 2001;21 (9): 3236-3241 ။ [PubMed]
15 ။ Koch က M, Schmid တစ်ဦးက, Schnitzler Hu ။ ထိတ်လန့်၏အပျြောအပါး-ကို attenuation နျူကလီးယပ် accumbens ၏တွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ Neuroreport ။ 1996;7 (8): 1442-1446 ။ [PubMed]
16 ။ Knutson B ကိုအဒမ် CM, Fong သည် GW, တိုးပွားလာငွေကြေးဆုလာဘ်၏ Hommer ဃရှိလာရွေးချယ်နျူကလိယ accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21 (16): RC159 ။ [PubMed]
17 ။ ရို RC, Beck JG ။ ရို RC, Beck JG, အယ်ဒီတာများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ psychophysiology လူ့ဘာသာရပ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ။ 1988 ။ လိင်စိတ်နိုးထပုံစံများ။ Psychophysiological လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လက်တွေ့ applications များ။ နယူးယောက်: Guilford ။
18 ။ Wespes အီး, Amar အီး, Hatzichristou: D, Hatzimouratidis K ကို Erectile အလုပ်မဖြစ်အပေါ် Montorsi အက်ဖ်လမ်းညွှန်ချက်များ။ 2005 ။ (Urology ၏ဥရောပအစည်းအရုံး) ။
19 ။ Hart ကို C, Meston CM ။ ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး: ကွေယောက်ျားအတွက်ဇီဝကမ္မနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအပေါ်နီကိုတင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုလိင် Med ။ 2008;5: 110-21 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ Sheehan DV, Lecrubier Y ကို, Sheehan KH, Amorim P ကို, Janavs J ကို, et al ။ Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI): DSM-IV နှင့် ICD-10 များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကို။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;29: 22-33 ။ [PubMed]
21 ။ ရို RC, Riley တစ်ဦးက, Wagner, G, Osterloh ih, ပက်ထရစ် J ကို, et al ။ Erectile ရာထူးအမည် (IIEF) ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအညွှန်း: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကဲဖြတ်များအတွက် multidimensional စကေး။ Urology ။ 1997;49: 822-830 ။ [PubMed]
22 ။ hoon EF, hoon PW, Wincze JP ။ အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏တိုင်းတာခြင်းများအတွက်စာရင်း။ arc လိင်ပြုမူနေ။ 1976;5: 291-300 ။ [PubMed]
23 ။ Derogatis LR ။ အဆိုပါ SCL-90R လက်စွဲစာအုပ်။ ဗြဲအမှတ်ပေး, အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် SCL-90R များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ Baltimore, MD: လက်တွေ့ Psychometrics ။ 1977 ။
24 ။ ပီးလ်ဘာ့ဂ်ကို C, Gorsuch RL, Lushene RE ။ အဆိုပါ State-ရိုစိုးရိမ်စိတ်စာရင်း။ Palo Alto, CA: စိတျပညာစာနယ်ဇင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း။ 1970 ။
25 ။ Carver CS, အဖြူရောင်တီအပြုအမူတားစီး, အမူအကျင့်ကို Activation နှင့်ခါနီးဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်မှထိခိုက်စေတုံ့ပြန်မှု: အ bis / BAS အကြေး။ ဂျေ Pers နှင့် Soc စိတ်ပညာ။ 1994;67: 319-333 ။
26 ။ Smith က SM, Jenkinson M က, Woolrich မဂ္ဂါဝပ်, Beckmann CF, ဘီရန်း TE, et al ။ FSL အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MR image ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အကောင်အထည်ဖော်တိုးတက်လာ။ NeuroImage ။ 2004;23: 208-219 ။ [PubMed]
27 ။ Jenkinson M က, Beckmann CF, ဘီရန်း TE, Woolrich မဂ္ဂါဝပ်, စမစ်သည် SM ။ FSL ။ Neuroimage ။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။ 2012 ။
28 ။ Jenkinson M က, စမစ်သည် SM ။ ဦးနှောက်ပုံရိပ်တွေ၏ကြံ့ခိုင်ဆှဖှေဲ့မှတ်ပုံတင်များအတွက်တစ်ဦးကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ optimization နည်းလမ်း။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Image ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ 2001;5: 143-156 ။ [PubMed]
29 ။ Jenkinson M က, Bannister PR စနစ်, Brady JM, စမစ်သည် SM ။ ဦးနှောက်ပုံရိပ်တွေများ၏ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန် linear မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်းများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော optimization ။ NeuroImage ။ 2002;17: 825-841 ။ [PubMed]
30 ။ Patenaude B က, စမစ်သည် SM, ကနေဒီ, D, Jenkinson, MA ။ Subcortical ဦးနှောက်အဘို့အ Shape နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်၏ Bayesian မော်ဒယ်။ Neuroimage; 1 ။ 2011;56 (3): 907-22 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ Zarei M က, Patenaude B, Damoiseaux J ကို, Morgese ကို C, စမစ်က S, et al ။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက် thalamic ယိုယွင်းတစ်ခု MRI လေ့လာမှု: ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ဆက်သွယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေါင်းစပ်ပြီး။ Neuroimage ။ 2010;49: 1-8 ။ [PubMed]
32 ။ တစ်ဦးက hidden Markov ကျပန်းလယ်ပြင်မော်ဒယ်နှင့်မျှော်လင့်အကျယ်ချဲ့ algorithm ကိုမှတဆင့် Zhang က Y ကို, Brady က M, ဦးနှောက် MR ပုံရိပ်တွေ၏ Smith ကအက်စ် segment ။ ကို IEEE ဖြတ်ကျော်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Imaging ပေါ်မှာ။ 2001;20: 45-57 ။ [PubMed]
33 ။ Holle: D, Naegel S က, Krebs က S, Gaul ကို C, Gizewski အီး, et al ။ hypnic ခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက် Hypothalamic မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အရှုံးပေါ်။ အမ်း Neurol ။ 2011;69: 533-9 ။ [PubMed]
34 ။ et al Baroncini M က, Jissendi P ကို, Balland အီး, Besson P ကို, Pruvo JP ။ လူ့ hypothalamus ၏ MRI Atlas ။ Neuroimage ။ 2012;59: 168-80 ။ [PubMed]
35 ။ Ashburner J ကို, Friston K. Voxel-based morphometry-အဆိုပါနည်းလမ်းများ။ NeuroImage ။ 2000;11: 805-821 ။ [PubMed]
36 ။ ကောင်းသောကို C, et al Johnsrude ငါ Ashburner J ကို, Henson R ကို, Friston K သည်။ 465 သာမန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကလူ့ဦးနှောက်အတွက်အိုမင်းတဲ့ voxel-based morphometric လေ့လာမှု။ NeuroImage ။ 2001;14: 21-36 ။ [PubMed]
37 ။ Smith က SM ။ အစာရှောင်ခြင်းကြံ့ခိုင် automated ဦးနှောက်ထုတ်ယူခြင်း။ လူ့ဦးနှောက်မြေပုံ 2002 ။ 2002;17: 143-155 ။ [PubMed]
38 ။ Andersson JLR, Jenkinson M က, စမစ်အက်စ်က Non-linear optimization ။ FMRIB နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ TR07JA1 ။ 2007 ။ ရရှိနိုင်ပါ: http://www.fmrib.ox.ac.uk/analysis/techrep။ 2012 မေလ 29 ဝင်ရောက်။
39 ။ Andersson JLR, Jenkinson M က, စမစ်အက်စ်က Non-linear မှတ်ပုံတင်ရေး, ခေါ် Spatial ပုံမှန် FMRIB နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ TR07JA2 ။ 2007 ။ ရရှိနိုင်ပါ: http://www.fmrib.ox.ac.uk/analysis/techrep။ 2012 မေလ 29 ဝင်ရောက်။
40 ။ Everitt BJ ။ လိင်လှုံ့ဆျောမှု: အထီးကြွက်များ၏အစာစားချင်စိတ် copulatory တုံ့ပြန်မှုအခြေခံသည့်ယန္တယားတစ်ခုအာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1990;14: 217-32 ။ [PubMed]
41 ။ Zahm DS ။ နျူကလီးယပ် accumbens အပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူတုံ့ပြန်သပ္ပါယ်အချို့ subcortical အလွှာတခုတခုအပေါ်မှာ Integrated neuroanatomical ရှုထောင့်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2000;24: 85-105 ။ [PubMed]
42 ။ Sabatinelli: D, Bradley MM, Lang PJ, ကော်စတာ VD, Versace အက်ဖ်ပျော်ရွှင်မှုထက် salience လူ့နျူကလိယ accumbens နှင့် medial prefrontal cortex မြှင့်လုပ်ဆောင်။ J ကို Neurophysiol ။ 2007;98: 1374-9 ။ [PubMed]
43 ။ Berridge KC ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်မှာဆွေးနွေးငြင်းခုံ: မက်လုံးပေး salience များအတွက်အမှု။ Psychopharm ။ 2007;191: 391-431 ။ [PubMed]
44 ။ Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Farrar တစ်ဦးက, Mingote သည် SM ။ နျူကလိယ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine နဲ့ဆက်စပ် forebrain ဆားကစ် accumbens ။ Psychopharm ။ 2007;191: 461-482 ။ [PubMed]
45 ။ Ambroggi က F, Ghazizadeh တစ်ဦးက, Nicola သည် SM, Fields HL ။ နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍမက်လုံးပေး-cue တုံ့ပြန်များနှင့်အမူအကျင့်တားစီးအတွက် core နဲ့ shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2011;31: 6820-30 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
46 ။ သိပ်မရှိပါဘူး RG, Baum MJ ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ / ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် anterior hypothalamus ၏အခန်းက္ပ။ Annu ဗြာလိင် Res ။ 1997;8: 68-101 ။ [PubMed]
47 ။ လွိုက်လုပ် SA, Dixson AF ။ အထီးဘုံ marmoset (Callithrix jacchus) ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်သို့ hypothalamic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1998;463: 317-329 ။ [PubMed]
48 ။ သိပ်မရှိပါဘူး RG, Tzschentke T က, အ medial preoptic ဧရိယာ / anterior hypothalamus (MPOA / AH) ၏ Nakach N. ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အထီးကြွက်များတွင်မိတ်ဖက် preference ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဦးနှောက် Res ။ 1998;813: 1-8 ။ [PubMed]
49 ။ Hurtazo HA, သိပ်မရှိပါဘူး RG, အ medial preoptic ဧရိယာ / anterior hypothalamus ၏ Agmo အေ Inactivation lidocaine အားဖြင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းစေသည်။ neuroscience ။ 2008;152: 331-337 ။ [PubMed]
50 ။ Swanson LW ။ Bjorklund တစ်ဦးက, Hokfelt T က, Swanson LW, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါ hypothalamus ။ 1987 ။ ဓာတု Neuroanatomy ၏လက်စွဲစာအုပ်။ အမ်စတာဒမ်: Elsevier ။ စစ 1-124 ။
51 ။ de Jong က LW, ဗန် der et al Hiele K ကို Veer ထားတဲ့ IM, Houwing JJ, Westendorp RG ။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက် putamen နှင့် thalamus ၏ပြင်းပြင်းထန်ထန်လျှော့ချ volumes ကို: တစ်ဦး MRI လေ့လာမှု။ ဦးနှောက်။ 2008;131: 3277-85 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
52 ။ Bookstein FL ။ '' Voxel-based morphometry '' imperfectly မှတ်ပုံတင်ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူမသုံးသင့်ပါတယ်။ 2001;Neuroimage14: 1454-1462 ။ [PubMed]
53 ။ Frisoni GB ကို, Whitwell JL ။ ဘယ်လောက်မြန်က doc go ကြမည်နည်း အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါလူနာတစ်ဦးထံမှအဟောင်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဘို့အနယူးကိရိယာများ။ အာရုံကြော။ 2008;70: 2194-2195 ။ [PubMed]